Safar wasiirada Gaashaandhiga iyo Warfaafinta Somalia ku tali lahaayeen Kismaayo oo baaqdey ka dib markii Maamulka Gobolkaas ay diidmo ka muujiyeen imaantinkooda – idalenews.com
Safar wasiirada Gaashaandhiga iyo Warfaafinta Somalia ku tali lahaayeen Kismaayo oo baaqdey ka dib markii Maamulka Gobolkaas ay diidmo ka muujiyeen imaantinkooda
Safar ay gelinkii dambe ee maanta Wasiiro ka tirsan Xukuumada iyo Saraakiil ciidan ay ku tagi lahaayeen magaalada Kismaayo ayaa dib u dhac ku yimid, kadib markii ay cirka isku shareertay xiisada ka jirta magaalada.
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo uu wehliyay Wasiirka Warfaafinta, Taliyaha ciidamada iyo saraakiil kale ayaa ka baaqday diyaarad ka qaadi laheyd garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, iyadoo markii ay tageen garoonka Aadan Cade ee magaalada Muqdisho lagu wargeliyay inay baaqdaan.
Wararka qaar ayaa sheegaya in wasiirada iyo saraakiisha loo diiday inay ka soo degaan Kismaayo, inta aysan ka soo ambabixin garoonka Muqdisho, iyadoo muddo Wasiiradan ku sugnaayeen garoonka diyaaradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho.
Lama oga sababaha rasmiga ee dib u dhaca keenay, hase ahaatee arrintan ayaa u muuqata mid xiisada ka jirta Kismaayo ay hareysay ambabaxooda, iyadoo wali garoonka diyaaradaha Kismaayo uusan ka bixi karin Abaanduulaha Ciidamada xooga dalka Jen. C/risaaq Khaliif Cilmi.
Maamulka Axmed Madoobe ayaa ku hanjabay inuu iska difaaci doono cid walba oo weerar ku ah Jubaland, iyagoo ku eedeeyay wafdiga dowladda ee Xildhibaanada ah ay hurinayaan dagaalo, isla markaana ay doonayaan inay iska horkeenaan beelaha Gobolka.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Axmed Madoobe oo maanta ka qeyb galay shir ka dhacay Kismaayo oo looga soo horjeeday siyaasada dowladda ee ku wajahan Jubooyinka ayaa si cad u sheegay inay la dagaalami doonaan cid kasta oo caqabad ku ah maamulka Jubaland.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in dareys milateri iyo hub la gaarsiiyay ciidamada dowladda ee ku sugan Kismaayo, kadib markii Abaanduulaha Ciidamada xooga dalka, iyadoo taasi ay dhalisay xiisad iyo dhaq dhaqaaqyo ciidan.
Qaar ka mid ah mudanayaashi baarlamaanka ee dhowaan gaaray Kismaayo ayaa sheegay in Ciidamada Kenya ay ku wargeliyeen in aanay ammaankooda sugi karin, hase ahaatee markii dambe ammaankooda la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Xaalad kacsanaan ah ayaa ka jirta magaalada Kismaayo, iyadoo maanta la xiray dhaq dhaqaaqa ganacsiga, isla markaana uu hakad galay gaadiidka, iyadoo magaalada lagu arkay ciidamo fara badan oo difaacyo ka sameystay magaalada.
Muranka ku saabsan maamulka Jubaland ayaa soo bilowday bartamihii bishan, iyadoo wixii ka dambeeyay ay isa soo tareysay xiisada ka taagneyd magaalada, markii dhowr madaxweynayaal lagu doortay magaalada, waxaana la ogeyn halka xaalada ku dambeyn doonto.
Qarax dad ay ku dhaawacmeen oo ka dhacey Baydhabo
Kulan ka dhacey Jaamacadda Kismaayo oo Digniin culus loogu direy Xildhibaan Xoosh iyo Diyaargarow dagaal oo Kismaayo ka bilowdey (Dhageyso+Daawo)